माओवादी सांसदको प्रश्न : कुलमान बुढो भएपछि सरकारले के गर्छ ?
शुक्रबार, साउन २९, २०७८ ९:१५
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले कुलमान घिसिङबाहेक राम्रो काम गर्ने मान्छे कोही नदेखेको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले कुलमानबाहेक अर्को कोही मान्छे छैन भन्दै कुलमान बुढो भएपछि सरकारले के गर्छ भनी प्रश्न गरे ? ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
‘कुलमानले प्राधिकरणलाई फाइदै पुर्‍याएका छन्, तर कुलमानबाहेक अर्को मान्छे छैन त ? कुलमान बुढो भएपछि के गर्छ त सरकारले ?’ उनले भने । सांसद महतले विद्युत प्राधिकरणबाहेक अरु सरकारी संस्थान पनि धरासायी रहेको भन्दै ती संस्थानबारे पनि ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेशकुमार राईले गोरखा भर्ती बन्द गर्ने गरी पहल गर्न माग गरेका छन् । ‘हामीले यो गोरखा भर्ती केन्द्र लामो समयदेखि बन्द हुनुपर्छ भन्यौं । यदि असमान सन्धिहरु समयसापेक्ष संशोधन हुँदैन भनेर गोरखा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले पहल गरोस्’ उनले भने ।